Ity dia, tsy misy isalasalana, ny tontolon'ny orinasa tsy mahazatra sy ny ho avy mampiahiahy izay vavolom-belona tamin'ny fiainako. Izany dia nilaza fa mijery ny fianakaviako sy ny namako ary ny mpanjifako mizara roa aho: hatezerana - tsy isalasalana fa ity no ratsy indrindra. Mijery olona tiako sy hajaiko amin'ny fahatezerana fotsiny aho manenjika ny rehetra. Tsy manampy na inona na inona izy io. Izao no fotoana tokony hanehoanao hatsaram-panahy. Paralisis - olona maro no miandry